Maraoka: matsiro fotsiny amin’izao! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Febroary 2009 20:00 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, বাংলা, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Tahaka ny resaka hanina avokoa no resaka tao amin'ny blogoma (bolongana maraokana) tamin'ity herinandro ity. Iray amin'ny heverina fa sarotra sy matsiro indrindra manerantany ny Moroccan cuisine (nahandro maraokana) izay avy amin'ny nahandro Arabo, Espaniola, Tiorka, Jiosy, ary fomban-drazana Amazigh sady fantatra amin'ny fampiasana anana sy episy (mpampatsiro hanina).
Mahalala tsara izany zavamisy izany ny mpamaham-bolongana miafina ao ambadiky ny hoe A Moroccan Kitchen; mizara fomba fikarakarana sakafo isan-kerinandro an'i riad ny bolongana izay fahanana mpahay Maraokana lakozia roa avy amin'ny Riad Laaroussa any Fez:
Tsara ny andro androany ka fotoana fitsangatsanganana: eo ny masoandro, ny zavamaitso, ny fitiavana sy ny fifaliana. Koa noho ny fangatahan'ny mpanjifan'i Riad iray, Atoa Francis, dia hanao Fassi harira izahay.
Ny zoma moa dia nantsoiko matetika hoe “Zoma Cous Cous.” te-hihinana cous cous foana aho isaky ny zoma saingy, tsy betsaka amin'ny olona eto amin'ny tanàna misy ahy no tsy manana sakafo atoandro matotra rehefa tonga ny zoma. Fa misy koa aloha fianakaviana matotra iray: Abdou any Azrou. iray amin'ny mpivarotra (karipetra) falehako i Abdou ary ny cous cous ataon'ny reniny no iray amin'ny tsara indrindra. Raha mankany Azrou aho ny zoma na noana cous cous fotsiny amin'izao, dia any amin-dry Abdou avy hatrany ny saiko rehefa misakafo atoandro zoma.
Andro masina silamo moa ny zoma. Mitovitovy amin'ny fahazarana kristiana (na tatsimo) manao sakafo be isak'alahady ny fahazarana mihinana cous cous isaky ny zoma. Tiako io, fa mampahatsiahy ahy ny any an-tanindrazana.
Na dia tsy hita loatra aza, dia aleoko ambara fa maro amin'ny mpanolo-tena (ao anatiny aho) no mampitaha ny cous cous ataon'ny vehivavy — tsy misy roa mba mitovy. Maro ny vehivavy tsara ny sakafony fa tsy izy kosa ny cous cous nataony. Tao anatin'ny 18 volana, telo ihany no nahazoako sakafo ratsy. Tsy ratsy izany taha izany an! Raha asaina hiverina hihinana cous cous amin'ireo toerana telo ireo, dia hitady hevitra aho hialana ka aleo misotro dite. Hatramin'izao aloha dia nety e!
Tena mahavita cous cous tsara mihitsy ny fianakaviana mampiantrano ahy. Na dia fotoanan'ny fanjifana sy ny asa mafy aza moa amin'izao fotoana izao, dia efa nampanantena ny hianatra aho.Avo loatra ny fanantenako. Hianatra ny fototra fotsiny aho dia mba afa-mizara ny hakanton'ny cous cous any amin'ny fianakaviako any Florida. Hoavy ny andro.
Mizara sarin-tsakafo mampilendalenda koa izy:
Niresaka sakafo ihany koa tamin'ity herinandro ity i Emma ao amin'ny The Good Life in Morocco. Ary dia niresaka ny sakafo avy tamin'ny lakozian'i riad koa izy tamin'ity herinandro ity:
Mieritreritra hao fa tokony hizara ny sasantsasany amin'ny sakafo mafilotra maraokana sy berbera. Maro ny salady maraokana. Andrahoina matetika ny salady maraokana. Ny voalohany dia avy amin'ny aubergine natono sy karaoty nampangotrahana, tongolo, menak'oliva ary anana vao notangosana. Ny salady faharoa kosa dia poavrao maitso nahandroana tamin'ny oliva sy voatabia, iray amin'ny ankafiziko indrindra.
Ny sary faharoa, misy poavrao maitso, oliva, sy salady voatabia hita eto ambany:
04 Septambra 2021Bahrain